Fetin’ny faran’ny taona: hanafana ny “Wanna Dance” i Safidy sy i Faniah | NewsMada
Fetin’ny faran’ny taona: hanafana ny “Wanna Dance” i Safidy sy i Faniah
Mihantomotra hatrany ny fetin’ny faran’ny taona sy ny fandraisana ny taona vaovao 2019. Mitady zava-baovao sy mifanaraka amin’ny zava-misy sy malaza hatrany ireo toerana filanonana, eto an-dRenivohitra sy ny manodidina, hanomezana fahafaham-po ny mpankafy lanonana, ny alin’ny 31 desambra.
Anisan’ny hiavaka amin’ny maro ny fiarahan’i Safidy (ao amin’ny tarika 123) sy i Faniah, eny amin’ny Tangaina Hôtel (Espace Seranana), amin’io “St Sylvestre” io. Samy tanora izy roavavy ireto ary samy manana ny mampiavaka azy, na eo amin’ny feo na amin’ny mozika lalaovina. I Safidy, fantatra avy hatrany amin’ilay feony matanjaka sy mikasaosaoka; i Faniah kosa, manam-peo malefaka, miangolangola ary mirona kokoa amin’ny filalaovana “jazz” sy “fusion”.
“Wanna Dance” ny lohatenin’ny fety hafanain’izy roa ireo, eny Ampitatafika eny, ny alin’ny alatsinainy izao. Nampanantena ny mpikarakara fa tsy voasakan’ny hatanoran’ireto andriambavilanitra mangafeo ireto ny fahalalany sy ny fahaizany ireo karazan-kira samihafa. Araka izany, samy hahazo ny anjarany ny sokajin-taona rehetra, manomboka amin’ireo nankafy ny hiran’ny taona 60 hatramin’ny tamin’ny taona 90, izay tena hanjaka amin’io fotoana io. Na izany aza, tsy hatao ambanin-javatra fa hoentina hampandihizana ny olona sy hamalifaliana azy ireo, ireo hira manana ny lazany amin’izao fotoana izao.
Tsy handeha irery i Safidy sy i Faniah fa hifarimbona hiaraka amin’ny Orchestre Baobab, efa tsy zovina amin’ny maro intsony. Hanelanelana amin’ny fanentanana sy kilalao samihafa kosa i DJ Benis (RDJ’s Team). Araka ny fanazavan-dRazafindratsimba Hary, tompon’andraikitra voalohany ao amin’ny toerana hanaovana ny lanonana sady mpikarakara, io ny fety goavana voalohany tontosain’izy ireo sy hampiantranoany. Na izany aza, tsy ho mena-mitaha amin’ny an’ny hafa ny lafiny fandaminana sy fanomezana fahafaham-po ny mpilanonana.
Ankoatra ny mozika sy ny dihy, tsy ho ambanin-javatra ny sakafo ho fandraisana am-pifaliana ny taona vaovao, raha ny fampanantenan’ny mpikarakara hatrany. Tsy ho ao anaty efitrano ihany ny lanonana, ao amin’ny Tangaina Hôtel, fa misy ihany koa ny “Grillade party” eny ivelany.